FILOHAN’NY CENI : “Mety hivoaka amin’ny herinandro ny vokatra ofisialy vonjimaika”
Ny herinandro ho avy io no hivoaka ny vokatra ofisialy vonjimaika avy amin’ny vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana (Céni) raha toa ka amin’ity faramparan’ny herinandro ity kosa no fantampantatra ha hisy ny fihodinana faharoa na tsy hisy, ho fantatra ireo kandidà roa hiatrika ny fihodinana faharoa. 9 novembre 2018
Mizotra miandalana ny fivoaran’ny voka-pifidianana. Efa manomboka tonga tsikelikely eo anivon’ny sampan-draharaha misahana ny fanisam-bato na SRMV ihany koa ireo tatitra sy ny vokatra avy amin’ireo birao fandatsaham-bato na dia voalaza aza fa somary mitarazoka ihany ny fahatongavany. Tonga nitsidika sy nijery akaiky ny fizotry ny asa teo anivon’ny SRMV tetsy Mahamasina ny filohan’ny Céni, Hery Rakotomanana, omaly maraina. Hatreto aloha dia saika ireo voaangona teny anivon’ireo birao fandatsaham-bato no avoakan’izy ireo. Nambarany fa mety anio na rahampitso maraina farafahatarany no fantampantatra izay kandidà hiatrika ny fihodinana faharoa, ho fantatra ihany koa na hisy na tsia izany fihodinana faharoa.
Ny herinandro ho avy izao kosa no hamoaka ny vokatra ofisialy vonjimaika ny eo anivon’ny vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana raha toa ka any amin’ny faramparan’ny volana novambra any no hamoaka ny vokatra tena ofisialy tamin’ity fihodinana voalohany ity ny Fitsarana avo mombany Lalàmpanorenana. “Androany na rahampitso maraina no ho fantatsika mazavazava ireo hanao ny fihodinana faharoa na ihany koa fihodinana voalohany ihany dia vita. Ny tena hamoahan’ny Céni an’ilay vokatra tena ofisialy dia mety amin’ny herinandro angamba”, hoy ny fanampim-panazavana avy amin’ny filohan’ny Céni, Hery Rakotomanana. Araka ny voalazany hatrany dia manahy amin’ny mety hisian’ny fanemorana ny famoahana ny vokatra tena ofisialy ny tenany noho ny fitarazohan’ny fahatongavan’ny vokatra avy amin’ireo toerana lavitra sy mideza. Na eo anivon’ny Céni na eny amin’ny Fitsarana avo momba ny Lalàm-panorenana dia mety ho voakasik’izay fihemorana izay avokoa, raha ny nambarany.
“Amin’ny 29 novambra no hamoahan’ny HCC ny vokatra ofisialy. Manahy ihany aho satria amin’io daty io no hamoaka ny vokatra ny Hcc kanefa 19 desambra no hatao ilay fifidianana fihodinana faharoa, izany hoe 29 novambra vao fantatra hoe iza avy ireo kandidà hanao ny fihodinana faharoa ka amin’izay vao handrafitra ny bilèta tokana sy hanatitra izany amin’ireo Fokontany rehetra manerana an’i Madagasikara”, hoy hatrany ny fanazavany. Ilaina araka izany ny fitoniana eo am-piandrasana ny fivoahan’ny vokatra tena ofisialy. Hatreto raha hita tamin’ireo vokatra rehetra efa nivoaka dia mitarika hatrany ny Kandidà n°13, Andry Rajoelina ary manaraka azy ny Kandidà Ravalomanana Marc n°25.